आलोचनाबाट नडराउनुस्, यसलाई ह्याण्डिल गर्नुहोस्
काठमाडौँ। मानिसले आलोचनाको डरले आफूलाई गर्न मन लागेको काम पनि हिचकिचाउँछ भने उत्साही रूपले काम गरिरहेको व्यक्ति आलोचनाले हतोत्साहित हुन सक्छ। तर आलोचनाले उपयुक्त तरिकाले लिन सक्ने व्यक्तिले आफ्नो कहिल्यै छोड्दैन।
आलोचना हरेक काममा हुन्छ। त्यसैले आलोचनासँग डराएर काम नगर्नु भनेको मूर्खता हो। तपाई मूर्ख नबन्नुहोस्। तपाईँको लक्ष्य के हो ? आलोचनालाई बुझ्नुभन्दा पहिले आफ्नो लक्ष्यलाई आत्मसात् गर्नुहोस्। अठोट गर्नुहोस् र आफूमा हिम्मत भर्नुहोस्। प्रत्येक व्यक्तिको आ-आफ्नो विचार हुन्छ।
कुनै पनि व्यक्तिले आलोचना गर्नु भनेको व्यक्तिले तपाईँ वा तपाईँको कामप्रति आफ्नो बिचार प्रकट गर्नु हो, र तपाईँको योजना र लक्ष्य भनेको तपाईँको आफ्नो विचारबाट उत्पादन भएको हो। अरूको बिचारले गर्दा आफ्नो बिचारलाई छायामा पर्न नदिनुहोस्। आलोचना दुई प्रकारका हुन्छ, सकारात्मक र नकारात्मक।
सकारात्मक आलोचनाले तपाईँको अझ निखार आओस् भन्ने चाहेको हुन्छ भने नकारात्मक आलोचना तपाईँलाई पछाडि धकेल्न प्रेरित हुन्छ। सकारात्मक आलोचना भनेको तिमीले यसो गरेको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो, तिमीले यो भन्नु वा गर्नुको साटो यसो भनेको वा गरेको भए हुन्थ्यो, जस्तो हुन्छ भने नकारात्मक आलोचना भनेको, तिमीले यो गर्न सक्दैनौ, तिमीले यो काम गरेर कही पनि पुग्दैनौ, त्यो लक्ष्यसम्म पुग्ने तिम्रो क्षमता नै छैन, जस्तो भनाइ हो।
तपाईँको कामको बारेमा आलोचना गर्ने व्यक्तिले तपाइले गरिरहेको कामलाई बुझेको छ कि छैन, त्यो सोच्नुहोस्। तपाईँको कामलाई नबुझेको व्यक्तिले दिएको आलोचनालाई गम्भीरताका साथ नलिनुहोस्। कामलाई बुझेको व्यक्तिले गरेको आलोचना हु भने, त्यो आलोचनाबारे उक्त व्यक्तिसँग र त्यो क्षेत्रको ज्ञान भएका अरू व्यक्तिसँग कुरा गर्नुहोस् र आफ्नो योजना र त्यो आलोचनालाई जोडेर हेर्नुहोस्।
आलोचनालाई योजनाको लागी सुझावको रूपमा हेर्नुहोस् तर लक्ष्य नबदल्नुहोस्। तपाईँको आलोचना गर्ने व्यक्तिले कस्तो अवस्थामा आलोचना गरेको हो ? उसले रिस वा आवेगमा आएर आलोचना गरेको हो भने, त्यसलाई गम्भीर तरिकाले नलिनुहोस्। तपाईँको काम वा योजनाको आलोचना गरेको व्यक्तिले तपाईँको क्षमतालाई कत्तिको बुझेको छ ? तपाईँको क्षमतालाई नबुझेको व्यक्तिले दिएको आलोचनालाई आफ्नो क्षमता समाजलाई देखाउनको लागी उत्प्रेरणाको रूपमा लिनुहोस्।
कुनै पनि आलोचनालाई व्यक्तिगत रूपमा नलिनुहोस्। त्यो आलोचनाको सकारात्मक पक्ष र नकारात्मक पक्षलाई केलाउनुहोस् र सकारात्मक पक्षमा जोड दिनुहोस्। सकारात्मक सोच राखेर हेर्नुभयो भने आलोचनाले तपाईँलाई कहिल्यै पनि निराशामा धकेल्दैन त्यसले तपाईँलाई अगाडी बढ्न प्रेरित गर्छ।
थप जानकारीः जीवनभरि गरीब बन्ने हाम्रा १० बानी
करोडपति बन्ने र धेरै धन कमाउने सपना कसको हुन्न र ? तर, सबैको यो सपना पूरा हुन सक्दैन। प्रत्येक व्यक्ति जान्न चाहन्छ कि आखिर करोडपति बन्न सफल मानिसहरुमा त्यस्तो के हुन्छ, जुन कुरा बाँकी मानिसमा चाहि हुन्न ? अर्थशास्त्री नेपोलियन हिलले ‘थिङ्क एण्ड ग्रो रिच’को अध्ययनमा यस्तै १० कुराहरु बताएका छन्, जो करोडपतिहरु गर्दैनन्। यसको अर्थ स्पष्ट छ, यदि तपाईंमा पनि करोडपति बन्ने सपना छ भने यी १० गल्ती गर्नबाट जोगिने गर्नुहोस्।
(१) समयको बेवास्ता :– यदि तपाईं कुनै विजनेश सुरु गर्न गइरहनुभएको छ भने एउटै चीजमा समय खेर फालेर त्यसलाई मात्र उत्कृष्ट बनाउँछु भनेर एकोहोरो नबन्नुहोस्। तपाईं एउटै चीजमा पछि लागिरहँदा तपाईंको प्रतिस्पर्धी बाँकी अन्य चीजमा निकै अगाडि बढिसकेको हुन्छ, अनि तपाई चाहि त्यही चीजको वरिपरि घुमिरहनुभएको हुन्छ।
धेरै परफेक्ट हुने चाहनामा कयौ समय तपाई अनुसन्धान नै गर्न चाहनुहुन्न। कुनै पनि बिषय र त्यसको सम्भावनामाथि अनुसन्धान नगर्नु तपाईलाई भारी पर्न सक्छ। कुनै पनि चीजमा धेरै नाफा चाहिन्छ भने उति नै अनुसन्धान र खोज गर्नुहोस्।
(२) आवश्यकता छनोट गर्न नजान्नु :– कतिपय समय यस्तो देखिन्छ कि तपाई आफूसँग भएको सबै पैसा एउटै चीज र एउटै समयमा दिल खोलेर खर्च गर्नुहुन्छ। तर यो ठूलो गल्ती हो। विश्वका धनी भन्दा धनी व्यक्ति खर्च गर्नुभन्दा अगाडि धेरै सोचविचार गर्छन्। उनीहरु आवश्यकताको हिसाबले मात्र खर्च गर्छन्। वारेन वफेट जस्ता सफल व्यक्तिहरु समेत आफ्नो खर्चलाई सीमित बनाएर चलिरहेका हुन्छन्। जस्तो, महंगो गाडी, मोवाइल, घर वा यस्तै चीज खरीदको चक्करमा धेरै खर्च गर्ने गल्तीबाट बच्नुपर्छ।
(३) वास्तविकता नचिन्नु :– कयौंपटक हामी अवास्तविक चीजको पछि कुदिरहेका हुन्छौं। यथार्थभन्दा निकै टाढाको विषय दिमागमा खेलाइरहेका हुन्छौं। यस्तै सोंच हाम्रो नोक्सानीको कारण बनिदिन सक्छ। यसकारण सधैं यथार्थ र सम्भव चीज मात्र सोच्नुहोस्। कुनै पनि व्यक्ति रातारात धनी बन्दैन, यसका लागि लामो समयको रणनीति बनाउनुहोस् र सोही अनुसार सोच्ने गर्नुहोस्। तपाईभित्र जति क्षमता छ, त्यसको पहिचान गरी त्यही हिसाबले काम गर्नुहोस्, अति महत्वकांक्षी बने त्यसले तपाईंलाई डुबाइदिन सक्छ।
(४) आँखा चिम्लिएर अरुलाई पछ्याउनु :– प्राय यस्तो देख्ने गरिन्छ कि हामीलाई अरुको कुरा जब निकै मनपर्छ भने आँखा चिम्लिएर त्यसको पछि कुद्छौं। मानिस जे भन्छन्, हामी त्यसको बिषयमा तुरुन्तै सोच्न सुरु गरिदिन्छौं। तर यसो गर्नु बिल्कुल सही होइन। अरुको कुरा जरुर सुन्नुहोस्, तर, त्यसमा आफ्नो दिमाग चलाउने गर्नुहोस्। विचार गर्नुहोस् कि उसले जे भनिरहेको छ, त्यो सही हो या गलत। त्यसपछि मात्र कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने आफूले निर्णय लिनुहोस्।
(५) प्लाष्टिक मनीमा विश्वास :– तपाईसँग जति नगद छ, त्यसैमा मात्र भरोसा राख्नुहोस् । याद राख्नुहोस् कि क्रेडिट कार्ड वा यस्तै कुनै प्लाष्टिक मनीले तपाईंको समस्या बढाइदिन सक्छ। यदि तपाईलाई क्रेडिट कार्डबाट खर्च गर्ने आदत बसेको छ भने बाँकी समय त्यसैको ऋण वा किस्ता तिर्दैमा ठीक्क हुन्छ। यस्तो अवस्थामा तपाईं भविष्यको विषयमा सोच्न सक्नुहुन्न।
(६) छोटो रणनीति बनाउनु :– कतिपय समयमा तपाईंलाई लाग्न सक्छ कि मेरो यो आइडियाको प्रयोगबाट तुरुन्तै पैसा कमाउन सकिन्छ। तर यो यथार्थ होइन वा हुन्न। तपाईं यति जान्नुहोस् कि छोटो अवधिको सफलता कहिलेकाही प्राप्त होला। तर त्यो दीगो वा दरिलो हुँदैन। यसकारण सधैं लामो समय सोचेरै दीर्घकालीन रणनीतिका साथ गलितो योजना बनाएर व्यापार थाल्नुहोस्।
(७) खराब संगतसँग समय बर्वाद :– धनी मानिस आफ्नो महत्वपूर्ण समय गलत मानसिकता भएका मानिससँग बिताउँदैनन् वा त्यस्ता मानिसको संगतमा खेर फाल्दैनन्। गलत र नकारात्मक सोंच भएको मानिससँगको संगतका कारण ऊभित्रको नकारात्मकताले तपाईंको मन मस्तिष्कमा पनि घर गर्न सक्छ। नकारात्मक मानिस तपाईलाई सधै नकारात्मक कुरा मात्र गरिदिन्छन्। भनिन्छ कि वातावरण वा संगतको असर स्वाभाविक रुपमा हामीमाथि पनि पर्छ। यसकारण यस्तो भीडबाट सधैं टाढा रहनु उत्तम हुन्छ।
(८) आफूप्रतिको अति भरोसा :– कतिपय मानिस सोच्छन् कि म जे गरिरहेको छु, त्यो एकदम ठीक हो, यसमा कुनै शंका नै छैन। कहिलेकाही आफूप्रति ज्यादै भरोसा वा अति विश्वास पनि ज्यादै खतरनाक हुन सक्छ। एकै व्यक्तिमा सबै खालको क्षमता हुँदैन। यसकारण टिम वर्कमाथि विश्वास गर्नुहोस्।
(९) सही समयमा सही निर्णय नलिनु :– हरेक मानिसको समय एकै खालको हुँदैन। तर सफल मानिसहरु समयलाई चिन्दछन् र सोही अनुसार उचित निर्णय लिन खप्पीस हुन्छन्। यस्तै असफल व्यक्ति सही निर्णय सही समयमा लिनबाट चुक्छन्। अनि ढिलो गरी आँखा खुलेपछि समयलाई दोष दिनतिर लाग्छन्, यो प्रवृत्ति गलत हो। त्यसकारण सही समयको पहिचान गर्न सिक्नु महत्वपूर्ण हुन्छ।
(१०) आफूमाथि विश्वास नराख्नु :– कतिपय अवस्थामा समय तपाईको प्रतिकूल भइरहेको हुनसक्छ र यस्तो बेलामा अत्तालिनु हुँदैन। समस्याले पिरोलेको बेला आफूमाथि भरोसा राख्नु निकै महत्वपूर्ण हुन्छ। तर, समस्याले थिचेपछि मानिस आफ्नो विश्वास नै डगमगिन दिन्छ र नोक्सान व्यहोर्छ। त्यसकारण सधैं आफूमाथि सबैभन्दा बढी विश्वास गर्नुहोस्।